Mofon’aina – ALAROBIA 30 AOGOSITRA 2017 – Athis Fanantenana
7 Ary Ebeda-meleka Etiopiana, tandapa anankiray tao amin’ ny tranon’ ny mpanjaka, raha nandre ny nandatsahany an’ i Jeremia tao amin’ ny lavaka (nipetraka teo amin’ ny vavahadin’ ny Benjamina ny mpanjaka androtr’ iny),8 dia nivoaka avy tao an-tranon’ ny mpanjaka izy ka nanao tamin’ ny mpanjaka hoe:9 Ry tompokolahy mpanjaka, ratsy avokoa izay rehetra nataon’ ity firenena ity tamin’ i Jeremia mpaminany, fa nataony tao an-davaka izy ka ho faty mosary ao amin’ izay itoerany, satria tsy misy mofo intsony ato an-tanàna.10 Ary ny mpanjaka nandidy an’ i Ebeda-meleta Etiopiana hoe: Mitondrà telo-polo lahy hiaraka aminao hampakatra an’ i Jeremia mpaminany hiala ao anaty lavaka, dieny tsy mbola maty izy.11 Ary Ebeda-meleka nitondra ny olona niaraka taminy, ka dia lasa nankany amin’ ny tranon’ ny mpanjaka eo ambanin’ ny trano firaketana, ary naka lamba rovitra sy vorodamba tao izy, ka nampidininy tamin’ ny mahazaka ho ao amin’ ny lavaka izany ho ao amin’ i Jeremia.12 Dia hoy Ebeda-meleka Etiopiana tamin’ i Jeremia: Ataovy eo ambanin’ ny helikao ireto lamba rovitra sy vorodamba ireto ho efitry ny mahazaka, dia nataon’ i Jeremia izany;13 ka dia nosintoniny tamin’ ny mahazaka Jeremia ka nakariny avy tao anaty lavaka, ary dia nitoetra teo amin’ ny kianjan’ ny trano fiambenana izy.14 Ary Zedekia mpanjaka naniraka naka an’ i Jeremia mpaminany hankao aminy tao amin’ ny fidirana fahatelo, izay ao an-tranon’ i Jehovah. Dia hoy ny mpanjaka tamin’ i Jeremia: Hanontany zavatra kely aminao aho, ka aza anafenana.15 Ary hoy Jeremia tamin’ i Zedekia: Raha ambarako anao, dia tsy hovonoinao tokoa va re aho? Fa na dia omeko saina aza ianao, dia tsy hihaino ahy tsinona.16 Ary Zedekia mpanjaka nianiana mangingina tamin’ i Jeremia nanao hoe: Raha velona koa Jehovah, Izay nanao izao fanahintsika izao, dia tsy hamono anao tokoa aho, na hanolotra anao eo an-tànan’ ireto olona mitady ny ainao ireto.
JEREMIA 38 :7-16
NY FANDRESENA OMEN’NY TOMPO
Efa nampiomana an’i Jeremia ny Tompo fa maro ireo fijaliana tsy maintsy atrehany , nefa hoy Izy hoe : « momba anao Aho , hamonjy anao Aho »( Jer 1 :8). Ny fanafahana sy fiarovana no nasehon’ny Tompo an’i Jeremia.
Teo anatrehan’ny fanenjehana, fanagadrana, fandatsahana an-davaka dia naneho ny fahalehibiazany ny Tompo. Na dia eo aza ny fijaliana tsy maintsy atrehan’ny mpanara-dia ny Tompo dia tsy mitazam-potsiny Izy, fa manafaka amin’ny loza. Ebeda-meleka eto no fitaovana nentiny nanafahana an’i Jeremia. Andriamanitra dia tsy mitsahatra mikaroka ny fomba rehetra hanafahana antsika. Ny zanany lahitokana no antoka tsara indrindra amin’izany.
Nanome toky i Zedekia mpanjaka ary nianiana fa tsy hanome na hanolotra an’i Jeremia eo an-tànan’ireo olona mitady ny ainy ireo. Sady manafaka ao anaty lavaka ny Tompo no miaro ny ain’ny mpanompony. Toky ho antsika izany fa misy olona efa omanin’ny Tompo izay hitondra vahaolana azo antoka ho antsika. Porofon’ ny teniny izany manao hoe : « hamonjy anao Aho »
Tsaronao ve inona avy ireo toe-javatra efa niainanao nanehoan’ny Tompo ny fiarovana sy ny fanafahany anao ?